eTricks C01 – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2021
तपाईंको वेबसाइटको गुगल कोर वेब भिटेल स्कोर परीक्षण गर्नुहोस्।
परीक्षण शुरू गर्नुहोस्
PageSpeed.PRO द्वारा सबै इन-एक परीक्षण
📣 विज्ञापन गर्नुहोस्
np.e-scooter.co - इलेक्ट्रिक स्कूटर 2021
हामी यो गाइड सुधार गर्नका लागि व्यापार साझेदार खोज्दैछौं।
यो मार्गदर्शक +200 देशहरूमा खरिदहरू पुग्छ र स्वच्छ गतिशीलतालाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ। [ अधिक जानकारी ]
🛵 फिल्टरहरू ➜ ➜
2.1 केडीई (2.8 एचपी)
✓ बेल्ट ड्राइभ
✓ हटाउन योग्य ब्याट्री
25 र 45 किमी / घन्टा
चाँडो चार्जर: 2.5 घण्टा
C01 एक इलेक्ट्रिक मोपेड फ्रान्सबाट इलेक्ट्रिक मोपेड निर्माता eT्रिक्स द्वारा छ। सन् २०० 2007 मा स्थापित यस कम्पनीले २०० in मा पहिलो इलेक्ट्रिक मोपेड सिर्जना गर्‍यो। इट्रिक्स मोपेड फ्रान्समा निर्मित छन् र धेरै गुणवत्ता पुरस्कारहरू पनि जितेका छन्।
C01 ईट्रिक्सले निर्मित पहिलो मोपेडको नयाँ संस्करण हो। मोपेडको डिजाइन २०० in मा शुरू भयो।
मोपेडसँग efficient 45 किमि प्रति घण्टाको उच्च गतिको लागि उर्जा कुशल २,१०० वाट इलेक्ट्रिक मोटर छ। मोटरले छिटो त्वरणको लागि १०० एनएम टार्क प्रदान गर्दछ।
मोपेडसँग rem ० किमीको दायराका लागि दुई हटाउन योग्य २ 90. Ah अह लिथियम ब्याट्री छ। चार्ज समय द्रुत चार्जरको प्रयोग गरेर २. hours घण्टा हुन्छ।
मोपेडसँग मोनो-बीम एयरोनॉटिकल एल्युमिनियम फ्रेम छ र तौल मात्र 39 kg केजी छ।
मोपेड कुनै पनि रंगमा र अनुकूलन व्यवसाय प्रिन्टको साथ उपलब्ध छ।
मोपेडलाई अनलाइन अर्डर गर्न सकिन्छ र विश्वव्यापी रूपमा पठाइन्छ।
2021 eTricks मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै eTricks स्कूटरहरू हेर्नुहोस्:
यो गाडी आयात गर्नुहोस्
यस वाहनलाई Nepal मा आयात गर्न चाहनुहुन्छ? तलको फारम भर्नुहोस् र np.e-scooter.co टीमले तपाईलाई आयात विशेषज्ञ पत्ता लगाउन को लागी तपाईको ढोकामा आयात, रेजिष्ट्रेसन र डेलिभरी ह्यान्डल गर्न को लागी कोशिश गर्नेछ।
आयातकर्ताले Nepal मा सवारी दर्ता ह्यान्डल गर्नुपर्नेछ। म गाडी बीमामा रुचि राख्छु। म सवारी साधन वित्त मा इच्छुक छु। म सवारी मर्मत र वारंटी सेवामा रुचि राख्छु।
अधिकतम वितरण समय:
Asap (सकेसम्म चाँडो)केही हप्ता भित्रएक महिना भित्रधेरै महिना भित्र
जब हामी आयातकर्ता भेट्छौं, तपाईंले एक मूल्य उद्धरण र सम्पर्क विवरणहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
एक वाहन को आयात को लागी मानिसहरूलाई मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ? हामीलाई info@e-scooter.co मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
स्कूटर ब्रान्ड चयन गर्नुहोस्
गति सबै25 र 45 किमी / घन्टा25 किमी / घन्टा45 किमी / घन्टामोटरसाइकल
न्यूनतम दायरा सबै
न्यूनतम पावर सबै
अधिकतम शुल्क समय सबै
फिल्टर रिसेट गर्नुहोस्
उत्पादनमा (मोडेल 2021)
विक्रेता / आयातकर्ता मा
दुई-व्हील ड्राइव (२ डब्ल्यूडी)
मनपर्ने फिल्टर सिर्जना गर्न बटन प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको मनपर्नेमा लिंक गर्नुहोस्:
⭐ गुगल Nepal मा खोज लोकप्रियता मा आधारित क्रमबद्ध।
मे 17, 2021 (अद्यावधिक गर्नुहोस्)
कम वायु प्रदूषण ? np.e-scooter.co मा एक स्वयंसेवक बन्नुहोस्।
डिस्क ब्रेक द्वारा वायु प्रदूषण मानक कार द्वारा कुल उत्सर्जन को 20 % को कारण हुन्छ जबकि धेरै मान्छे को वायु प्रदूषण को स्रोत मा डिस्क डिस्क ब्रेक कभी नहीं मानिन्छ।
हामी Google Air View को लागि स्वस्थ शहर हावा को प्रमोटर हो।
© 2021 np.e-scooter.co